'Evolution' dia rindrina lehibe mampiseho ny fivoaran'izao tontolo izao | Famoronana an-tserasera
Rindrina lehibe eo amin'ny rindrina lehibe aseho ny fivoaran'ny zavamananaina eto amin'ity planeta ity amin'ny fomba hafahafa amin'ny fananganana azy eo alohan'ny mpandalo mba hanolotra ny hafatra momba ny fampiroboroboana ny famotehana tena.
Io no hevitra ao ambadiky ny rindrina antsoina hoe 'Evolisiona' izay nanondroana azy toy ny teknolojia ihany ary ny forona no manimba ny zava-mitranga rehetra amin'ny fivoarana miandalana amin'ny tantara. Ny fakana azy amin'ny rindrina lehibe koa satria io tranobe io dia manome heviny hafa handaozana ny mpandalo gaga noho ny dikan'ity rindrina lehibe noforonin'ny mpanakanto antsoina hoe Blu ity.
Ho an'ny sasany dia tsy hanaiky izany izy ireo Anisan'ny olana ny fandrosoana ara-teknolojia izay mampamirapiratra an'ity rindrina ity. Fandikana maimaimpoana izay mety ho faran'ny karazan-javantsika na izao tontolo izao araka ny ahalalantsika azy. Saingy tsy maintsy manana izany halo mahatsiravina izany foana ianao rehefa mandinika asa toy ity izay aseho amin'ny alàlan'ny boribory mihidy ny fandrosoan'ny zavamananaina rehetra mandra-pahatongan'ny fahalavoan'ny hafa.
rariny ireo sombintsombiny latsaka ireo tranobe tandindon'ny kolontsaina tandrefana izy ireo satria singa sasantsasany izay nanana lanja lehibe tamin'ny fampandrosoana ny kolotsaina sy ny fikarohana toy ny boky.
Asa izay manandrana asongadino ny fotoana ahitantsika ny tenantsika ary izay no nilalaovana azy tamin'ny toerana mifanohitra amin'ny loko mena miaraka amin'ireo loko maitso izay ho mavo manohitra manga manga kokoa.
Azonao atao ny miditra amin'ny tranokala Blu avy amin'ity rohy ity izay azonao atao mahita asa bebe kokoa an'ity artista hosodoko ity ao anaty interface mahaliana izay miseho toa ny boky misokatra izay ahitantsika ny sary, rindrina ary fanavaozana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sary hosodoko amin'ny tranobe antsoina hoe 'Evolution' nataon'i Blu